4 Underrated Places In Eoropa Indray Andro Any By Train | Save A Train
Home > Train Travel Holland > 4 Underrated Places In Eoropa Indray Andro Any By Train
Fa ny tena mpandeha avy teo, izay mitady toerana tany Eoropa hita ety ivelany lamasinina satria aleony manaiky ny fifaliana ny lalamby Travel fientanam-po noho ny fiaramanidina, indro misy tapa-baovao lehibe ianao tia. Eoropa fitsangatsanganana mitaingina lamasinina isan'andro ao am-pon'ny ny tanàn-dehibe, mamela anao Eoropa mahatsapa ny zava-mahagaga tsy nandika ny banky raha mankafy ny manam-paharoa traikefa iray mitaingina lamasinina.
Here are some great toerana any Eoropa hita ety ivelany amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby:
Mitaingina lamasinina io dia haharitra ny 5 ora ary lany ianao £ 168 eo ho eo ny olona hiverina tapakila. Raha toa ianao manana hevitra faharoa momba ny nitsidika Frantsa, eto no mahatonga anareo tokony hamotsotra an'io toe-tsaina ratsy. Get ny fiaran-dalamby ary mitodi-doha tapakila nandamina tsara tarehy manatrika ity firenena. voalohany eny, Anarana iombonana amin'ny vehivavy tsara tarehy. faharoa, ny sakafo dia tsara, ary divay dia hoy izy ireo ny zavatra rehetra dia - lafo vidy fa mendrika izany. Amim-pahombiazana ny firenena izay mampakatra ny Gallic sy alemà fitaoman-dia amin'ny alalan'ny lavitra iray amin'ireo zavatra mampitolagaga indrindra ianao hahazo ny mizaha ao amin'ny androm-piainany. Ary ny zavatra rehetra ny Places in Europe Indray Andro Any By Train, Strasbourg ho anao swoon, ary ianao no maka selfies teo anoloan'ny faran'izay mampivarahontsana Strasbourg Katedraly.
Haka ny boky ianao te-hamaky ny momba ny 5.30 ora, satria izany no ela dia hitondra anao Ho mba ho Cologne. Mba hamaliana ny fanontaniana niaraka tamin'izay: Eny, ianao manova fiaran-dalamby ho any Brussels. Ny vidin'ny tapakila miverina £ 177, saingy mendrika izany. Nahoana? Satria izany no, Tsy isalasalana, ny tanàna tsara tarehy indrindra any Alemaina; regally nipetraka teo amoron 'ny Rhin, Cologne mijery mahatalanjona nandritra ny taona iray manontolo. Ve ianao foodie? Ianao tia ny eateries nanaraka ny akaiky rano tarihiny ny Am Frankenturm! koa, hijery tsara ilay Museum Ludwig ho jerena amin'ny zavakanto maoderina faran'izay.
Stuttgart any Cologne Lamasinina
Rotterdam dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra tany Eoropa hita ety ivelany amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby. Ianao mitaingina ny adiny efatra eo ho eo, ary dia hanana fiovam-fiaran-dalamby in Brussels. Tsy tokony handany ny £ 185 amin'ny miverina tapakila. Efa ela Rotterdam nanao laza ratsy karazana noho ny gritty amin'ny seranan-tsambo na inona na inona fa ny fanentanana an-tsary sy ny fandefasana fitoeran. Vao haingana, dia nanintsana ny laza sy ny mpizaha tany mba mahazo mahita izany ao amin'ny fahazavana vaovao tanteraka. Tamin'ity indray mitoraka ity around, ianao tia ny tanàna noho ny kanto sarobidy, ny Museum Boijmans Van Beuningen izay mitondra ny gamut hatrany Brueghel the Elder ka hatrany Salvador Dali. Misy be dia be ny mahita sy traikefa eto, ary ny zava-misy izay Rotterdam no hita ety ivelany ny rail fotsiny miampy iray hafa.
Ankoatry ny, teny an-dalana any no hahitanareo ny malaza tulip saha, ity dia hitondra anao any an-tanàna miaraka amina fihobiana lehibe.
Ny farany tamin'ny pick “Places in Europe Indray Andro Any By Train” dia – Antwerp (Belzika)
Ny fomba haingana hahazoana ny Antwerp dia amin'ny alalan'ny adiny efatra eo ho eo nandeha lamasinina sy miova fiaran-dalamby in Brussels. Tsy handoa £ 87 intsony ianao amin'ny tapakila miverina tsy mampino. Na dia eo aza ny toerana hafahafa (ny tanàna eo amin'ny sisin-tanin'i Belzika sy Holandy), Antwerp dia, hafahafa ampy, faran'izay azo idirana lamasinina. Azonao atao mihitsy aza mividy ny "Ny Belza Station" tapakila amin'ny alalan'ny Eurostar ary hahazo na aiza na aiza eto amin'ny firenena, Antwerp hita - miaraka amin'izay koa vidin'ny toy ny mitaingina ho Brussels. Antwerp dia ho tena mahaliana rehetra tia ny diamondra: Antwerp, Belzika prides ao amin'ny Diamond District, izay mirehareha ho ny tanàna izay ny sasany amin'ireo miavaka indrindra fanapahana, Nikosokosoka, dia manaova varotra diamondra / vatosoa hatao.
Breda ho Anvers Lamasinina
Mifandraisa Save A Train au livre ny lamasinina nankany amin'ny toerana tany Eoropa hita ety ivelany amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby, ary dia hanamaivana anareo na lafo saram famandrihana, fomba sarotra famandrihana, ary azo atao taha. Nahazo anao izahay nandrakotra dingana rehetra tamin'ny lalana. ary, indray mandeha ny zava-drehetra ny nandamina – Ataovy azo antoka tianao ny fiaran-dalamby sy ny mitaingina toerana halehany, maka sary be dia be, ary ampahafantaro anay ny fandehan'ny zavatra rehetra!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F4-underrated-places-in-europe-reachable-by-train%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#rotterdam Anvers strasbourg fiaran-dalamby soso-kevitra travelcologne